မန္တလေးတော်ဝင်နန်းတော် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
မန္တလေးမှာရှိတဲ့တော်ဝင်နန်းတော်မြန်မာဘုရင်စနစ်၏နောက်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်. နန်းတော်အမရပူရကနေမြို့တော်၏အပြောင်းအရွေ့မှာအောက်ပါအတိုင်း 1850 ရဲ့မင်းတုန်းမင်းအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်.
ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ Angkor Wat မှအပြင်ပန်းအပြင်အဆင်တွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်မန္တလေးတော်ဝင်နန်းတော်တစ် 65m ကျယ်ပြန့်ကျုံးနှင့်အရပ်ရပ်အပေါ် 2K ​​ရှည်လျားဖြစ်ကြောင်းထူခုခံကာကွယ်နံရံများကဝိုင်းနေသည်.
Angkor အားလုံးတစ်စုံစုံဇယားကွက်ပုံစံအတွက်ထွက်ချထားကျွန်းသစ်သစ်သားအဆောက်အဦးတစ်ခုအလုံးအရင်းနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောကျောက်အလယ်ပိုင်းဗိမာနျတျောမန္တလေးနန်းတော်ပြည့်စုံလေ၏ထားပါတယ်သွားရမည်အကြောင်း. ဒါဟာလက်ရှိအာဏာရတော်ဝင်မိသားစု၏အိမျအဖြစ်အစိုးရ၏ထိုင်ခုံနှစ်ဦးစလုံးခဲ့. အစိုးရကအရာရှိများများအတွက်လူနေမှုရပ်ကွက်များနှင့်ရုံးခန်းများအပေါငျးတို့သတော်ဝင်မိသားစုကသိမ်းပိုက်ခဲ့ဗဟိုစတုရန်းန်းကျင်ဖြန့်ခဲ့ကြ. သင်တည်ရှိခဲ့သည်ဗဟိုဧရိယာဖို့ပိုမိုနီးစပ်ခဲ့ကြ သာ. အရေးကြီးသော.
အဲဒါကိုတည်ဆောက်ခဲ့ချိန် မှစ. အဆိုပါနန်းတော်တစ်ကွက်သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပါတယ်. ဒါဟာသည်အထိသာတော်ဝင်နန်းတော်ခဲ့သည် 1885 တော်ဝင်မိသားစုကိုဗြိတိသျှတို့ကမောင်းထုတ်ခံရနှင့်အိန္ဒိယမှပြည်ပရောက်သောအခါ. ၎င်း၏တပ်များတစ်တပ်အဖြစ်ဗြိတိန်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်. အဆိုပါအဆောက်အဦမဟာမိတ်ဗုံးကြဲခြင်းဖြင့်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်အထိဂျပန်တပ်ဖွဲ့များ WW2 စဉ်အတွင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံသိမ်းပိုက်. ဗဟိုနန်းတော်ဧရိယာတဝိုက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည် 1990. ယနေ့တွင်ဗဟိုတော်ဝင်နန်းတော်ဧရိယာကိုပတျဝနျးကငျြတစျခုလုံးကိုဧရိယာကန့်သတ်ပိတ်ထားသည်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံကြည်းတပ်ကသိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်.
အဓိကဝင်ပေါက်များနှင့်လက်မှတ်ရုံး 66 လမ်းဆန့်ကျင်ဘက် 19 လမ်းအပေါ်နန်းတော်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါလက်မှတ်ရုံးကနေတော်ဝင်နန်းတော်မှရရန်အဓိက boulevade ဆင်း. သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်2အိမ်ရှေ့တံခါးနားမှာရှေးဟောင်းအမြောက်များ.
သင်အမြောက်များနောက်ကွယ်မှအဓိကပရိသတ်ကိုခန်းမဝင်တတ်သကဲ့သို့သင်တော်ဝင်မိသားစုများ၏ဟောင်းများကိုဓါတ်ပုံများ၏တစ်ဦး display ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရာဇပလ္လင်တော်အတွင်း၌ပါလိမ့်မယ်. ပတ်လည်လှည့်လည်သွားအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားတော်ဝင်နန်းတော်အဆောက်အဦးများသွားရောက်ကြည့်ရှု, ထိုအောင်ပွဲခံခန်းမနဲ့တူသောနေရာများအပါအဝင်, ဗဟိုနန်းတော်နှင့်ရှင်ဘုရင်နံနက် cuppa သူနေထိုင်ရာ၌ရှိ၏နေ့တိုင်းခဲ့ရှိရာလက်ဖက်ရည်ခန်း. အဆိုပါလက်ဖက်ရည် ROOM တွင်ရှေးခေတ်လှံနှင့်ဓားထားရှိမည်ရာသေးငယ်တဲ့လက်နက်တိုက်အဖြစ်နှစ်ဆ.
မြေတပြင်လုံးမန္တလေးနန်းတော်ဧရိယာ၏ကောင်းတစ်ဦးအမြင်ရရန်စောင့်ကြည့်လေ့လာထိပ်သို့တက် (စောင့်ကြည့်) ရဲတိုက်. ဂရိတ်အမြင်များ.
သင်မန္တလေးတော်ဝင်နန်းတော်နေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း – Google Maps ကို
သငျသညျလက်ဝဲမှာ PDF ကို icon ကို click ပါလျှင်စိတ်ဝင်စားဖြစ်စေခြင်းငှါသောသူတို့အဘို့သင်သည်တစ် pdf မိတ္တူကို download လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်4ထုတ်လုပ်မယ့်စာအုပ်၏စာမျက်နှာများ 1917 မြန်မာအစိုးရတို့ကမန္တလေးနန်းတော်တစ်ခု archaelogical စစ်တမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်. ဒါဟာအင်္ဂါရပ်အားလုံး၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူမူရင်းတော်ဝင်နန်းတော်များ၏အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုပြသ. နှစ်သက်.
အဖြစ်ကောင်းစွာ Archelogical ဇုန်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့မြို့အတွက်အဓိကနေရာအရပ်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်မန္တလေးနန်းတော်တစ်ဦးမြန်မာနိုင်ငံသို့မဆိုအလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ကိုတွေ့မြင်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်.